Banyere Anyị - Shenzhen Youlumi Co., Ltd
Kpọọ Anyị: +86 185 7557 3399
Ikanam Ọka Oriọna
Ikanam Garage ìhè Series
Ikanam IP64 ọka ìhè Series
Ikanam n'ọdụ ụgbọ mmiri Light
Ikanam Work Light
Ikanam Retrofit Kit
Ikanam High poolu Oriọna
Ikanam Linear Panel Light
Ikanam Linear Magnetik Retrofit Kit
Shenzhen Youlumi Co.LTD specializes na n'ichepụta Ikanam ọkụ ngwaahịa. Anyị na-anya isi a ọkachamara na ahụmahụ R & D otu, kpebisiri ike imeri ihe ịma aka nke mmepe, mmepụta na nkesa n'ụzọ nke ọkụ n'ichepụta. Youlumi kpaliri otu òtù propel ụlọ ọrụ ọganihu Ikanam technology. Isetịpụ a benchmark maka ya asọmpi na njem.
Guzosie Ike na July 2012, anyị mere ka na-amị ikanam bọlbụ na ọka ìhè na ngwaahịa. Na 2013, anyị na-ọma premiered anyị otutu 150W na 200W ọka ọkụ nke e dere ihe agbakwunyere ọkwọ ụgbọala. Anyị ngwaahịa nso nọgidere kọwakwuru na ugbu a mejupụtara 250W, 300W wdg ụdị.
Ugbu a, anyị flagship 250W ọka ìhè n'ụzọ zuru okè supersedes 400W na 1000W zoro ìhè isi. Na 2014, anyị retrofitting ngwa iwu na 80W, 100W wdg variants ngwaahịa na-etinye n'ime ahịa. Anyị elu n'ọnụ mmiri na n'okporo ámá ọkụ natara ọtụtụ ahịa si ezi appraisals.
The isi ngwa nke anyị ngwaahịa bụ na n'ụlọ nkwakọba, shopping malls, azụmahịa ụlọ ọrụ na iche iche n'èzí ntọala. Ngwaahịa ndị a si rụrụ uzo ozo na European na American ahịa. Anyị na ngwaahịa nwere ike na dochie niile gharazie ịba uru ìhè na isi mmalite tinyere CFL, HPS, ikanam UV n'ịgwọ Systems na Metal Halide globes iji na-enwe belata ike oriri. Anyị bụ isi ihe mgbaru ọsọ bụ iji nyere aka ahịa anyị na usen ha ọkụ eletrik na-akwụ ụgwọ na ọbọ ihe enviromentally friendly ọnọdụ.
Anyị ụlọ ọrụ slogan, ahịa-ndị dabeere, na-elekwasị anya n'ichepụta wezụga mpi ngwaahịa. Anyị nwere olileanya maka uru ibe mmepe na imekọ ihe ọnụ.
ụlọ ọrụ ADDRESS
Floor3, C Building Chuangfu Industrial Mpaghara, AiQun Road, Shiyan Town, Bao'an, Shenzhen, China